वीर अस्पतालका ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण, कसरी गर्ला उपचार?
वीर अस्पतालका ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण, कसरी गर्ला उपचार? २ सय ४७ कर्मचारी रुष्ट
कमला गुरुङ मंगलबार, भदौ २३, २०७७, १५:३१
काठमाडौं- देशकै पुरानो वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन २१ गते कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा गर्‍यो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गरेको हो।
कुल संक्रमितमध्ये हालसम्म २१ जना संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। अस्पतालमा उचपाररत तीन जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। डा कार्कीका अनुसार हाल अस्पतालमा ६९ जना संक्रमित उपचाररत छन्।
कोभिडका लागि हाल १ सय १० शय्या छुट्याइए पनि आवश्यकताअनुसार शय्या क्षमता बढाउँदै लैजाने अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेन्चुरीले बताए। उनले भने, ‘कोभिड अस्पताल भइसकेपछि हामीले हाल १ सय १० शय्याको व्यवस्था गरेका छौं। आवश्यकता अनुसार शय्या बढाउँदै लैजान्छौं।’
वीर अस्पतालका करिब ६ दर्जन स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् भने बाँकी केही स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालको व्यवस्थापनप्रति रुष्ट छन्। अस्पतालका करार, ज्यालादारी र अस्थायी गरी २ सय ४७ जना कर्मचारीले दुई महिना मात्र म्याद थप गरेको भन्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अस्पताल प्रशासनको व्यवस्थापकीय कमजोरी र लापरबाहीले आफूहरु जोखिममा पर्दै गएको वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु बताउँछन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै गएको उनीहरुको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा कति खर्च हुन्छ?
आइसियू बेड पाउनै मुस्किल, गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितले पनि पालो कुर्नैपर्ने बाध्यता
कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पछि हट्यो सरकार, विपन्न नागरिकको मात्र निःशुल्क गरिने